Izinyathelo Zesimanjemanje Nezibanzi ze-1Bdr Ukusuka Obhishi & Center - I-Airbnb
Izinyathelo Zesimanjemanje Nezibanzi ze-1Bdr Ukusuka Obhishi & Center
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Nilma
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Nilma izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ifulethi lasePeniche lipholile, linomoya futhi likhanyayo, likuhlomele ngokuphelele ukuhlala okuphephile nokujabulisayo. Itholakala phakathi nendawo kodwa ithule kakhulu, ungakwazi ukuhamba kalula uye olwandle, izindawo zokudlela nezimakethe. Ifulethi lisesitezi sesi-2 futhi libheke ngasentshonalanga linikeza umbono ovulekile wokushona kwelanga okuhle, kunezindawo eziningi zokupaka emgwaqweni ngaphambili noma ngemuva kwesakhiwo. IPeniche iyidolobha elivamile lokudoba futhi limaphakathi nePortugal. Cishe ku-1:30h ngebhasi ukusuka e-Lisbon kanye ne-1h ngemoto ukusuka esikhumulweni sezindiza.
Ifulethi kanye nazo zonke izinto ezisetshenziswa okuvamile zizohlanzwa kahle futhi zibulawe amagciwane ngaphambi kokufika kwakho, njengoba ukuphepha nempilo yakho kuyizinto ezisikhathaza kakhulu.
Ukwazi lokho, ungajabulela ukuhlala kwakho ngokuthula.
Jabulela ihora elijabulisayo ku-varanda ubukele ukushona kwelanga okuhle nama-seagull endiza noma ecwiliswe kubhavu ojulile ngemva kosuku olude lokuhlola.
I-HDTV engu-32" ene- I-Amazon Prime Video, I-Chromecast, I-Netflix, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
I-Praia do Portinho da Areia do Sul isendleleni nje, ilungele ukuphumula, ukushiswa ilanga futhi iphephile ukubhukuda, sicela uqaphele ukuthi akekho unogada.
I-Celeiro Café inikeza ukudla okunempilo nokumnandi kude nathi.
Eduze nje, kunekhefi elincane elinikeza iziphuzo nokudla okulula, ungase futhi uthenge isinkwa ekuseni.
Ungathenga umkhiqizo omusha eMakethe kaMasipala kusukela ngo-8am kuya ku-12pm nsuku zonke.
Ungaphuthelwa yiLace Museum, Resistance and Freedom Museum kanye nohambo lwaseBerlengas.
Ukushona kwelanga okuvela endlini ekhanyayo yaseCabo Carvoeiro kuyamangalisa.
I-Sanctuary encane ye-Nsa Sra dos Remédios ikhetheke kakhulu futhi, ingaphakathi likleliswe ngamathayili amahle wesiPutukezi.
Ungangithumelela umlayezo nganoma yisiphi isikhathi futhi ngizojabula kakhulu ukukusiza nganoma yini ongase uyidinge. Uma ngingatholakali, umngane wami nesibambisene naye u-Ana enizohlangana naye lapho ungena, uyotholakala ukuze akusize nganoma imiphi imibuzo noma usizo ongase uludinge.
Ungangithumelela umlayezo nganoma yisiphi isikhathi futhi ngizojabula kakhulu ukukusiza nganoma yini ongase uyidinge. Uma ngingatholakali, umngane wami nesibambisene naye u-Ana eni…
Inombolo yepholisi: 97114/AL